Xeebaha ugu dheer Yurub iyo Caalamka | Wararka Safarka
Xeebaha ugu dheer Yurub
Maria Jose Roldan | | Espana, Francia, Xeebaha
Haddii aad tahay qof jecel xeebta, muhiim maahan inaad ka gudubto "weelka" si aad ugu raaxeysato xeebaha ugu fiican adduunka, maadaama Yurub aan ku leenahay xeebo qurux badan oo waliba aad u dheer.
Haddii lagu daro xeebaha aad jeceshahay inaad aragto inaysan lahayn dhammaad, markaa ma awoodi doontid inaad seegto xeebaha ugu dheer Yurub maxaa yeelay waxaa laga yaabaa markaad ogaato waxa ay yihiin iyo halka ay joogaan ... waxaad bilaabi doontaa diyaarinta safar ku aaddan meelahan.
1 Labada dal ee u dhexeeya: Faransiiska iyo Boortaqiiska
1.1 Costa Caparica
2 Xeebaha ugu dheer adduunka
2.1 Praia do Cassino, Rio Grande oo ku taal Brazil
2.2 Xeebta Cox Bazar ee ku taal Bangladesh
2.3 Sagaashan Mile oo ku yaal New Zealand
2.4 Jasiiradda Fraser, Queens, Australia
2.5 Playa del Novillero, Nayarit, Mexico
Labada dal ee u dhexeeya: Faransiiska iyo Boortaqiiska
Waxaa jira laba dal oo u tartamaya sharafta haysashada xeebta ugu dheer Yurub: Faransiiska iyo Boortaqiiska. Ma geli doonno muranno waxaanan ku koobnaan doonnaa inaan soo bandhigno labada murashax, labadaba xeebo waaweyn oo si weyn loogu taliyay: Costa da Caparica, oo udhow Lisbon ayaa noqon lahaa kan ugu horeeya kan labaadna wuxuu noqon doonaa Las Landes, oo ah French Aquitaine.
Costa da Caparica waa dhul ballaadhan oo qurux badan oo bacaad leh in ka badan 230 kiiloomitir oo dherer koonfur ah ka xigta webiga Tagus (ama Tejo sida Boortaqiiska ugu yeero). Waa meel caan ah oo dadka deegaanku u xagaa baxaan xagaaga si ay qorax ugu soo baxaan waana caado in lagu qabto xaflad muusiko caan ah. Haa, dad badan ayaa aada xeebtaan laakiin cabirkeeda awgeed suuragal ma ahan in la arko xitaa kala bar buuxa.
Dhamaadka koonfureed ee Costa da Caparica waa meesha Lagoa de Albufeira, Meel dabiici ah oo dabiici ah oo u eg qaab lagu dhaqo halkaasoo ay ku nool yihiin dhir badan iyo noocyo xayawaan ah. Waa cajiib qurux badan! Marka lagu daro ku raaxeysiga xeebaha quruxda badan, waxaad sidoo kale ka fikiri kartaa dabeecadda dhammaan quruxdeeda. Shaki la'aan, waa meel aan fiicnayn oo lagu qaato fasax weyn, sidoo kale waxaan aad ugu dhownahay Spain! Muhiim maahan in diyaarado la qaato oo saacado iyo saacado la duulo ... Boortaqiiska ayaa ah dalka aan deriska nahay ee ugu dhow tanina waa cudurdaar buuxa oo aan ku booqano.
Waxaan qaadaneynaa juqraafi juqraafi ah waxaan aadey xeebta Atlantika ee Faransiiska oo ka tagta xadka Isbaanishka ilaa woqooyi oo fidisa 100 kiiloomitir. Waa xeebta bacaadka ah ee Landes waxayna ka kooban tahay xeebo isdaba-joog ah oo is-daba joog ah oo ay carqaladeeyaan tuulooyinka kalluumeysiga yaryar iyo aagagga dhagaxa leh. Halkan waxaa ku yaal farqiga iyo khilaafka Costa da Caparica, oo ah xeeb joogto ah oo aan ahayn xeebo isku xiran.
Xeebtan oo loo yaqaan Côte d'Argent (Xeebta Silver) Waxay ku habboon tahay kuwa raadinaya meel lagu nasto oo aan dad badani ku jirin ama doonaya inay ku raaxaystaan ​​dabeecadda, laakiin sidoo kale kuwa jecel isboortiga biyaha sida dabaasha, dabaysha dabaysha ama kitesurfing. Aag (ama xeebo) oo aadan awoodi karin inaad dhammayso ama booqato gebi ahaanba.
Xeebaha ugu dheer adduunka
Waa suurtagal in ka dib markii aad ogaatay labadan xeebood ee cajiibka ah oo aad ogaatay inay yihiin kuwa ugu dhaadheer Yurub, hadda waxaad dooneysaa inaad qaado hal talaabo oo dheeri ah oo aad ogaato taas oo noqon laheyd xeebaha ugu dheer adduunka. J) Haa, Markaad la kulanto, waxaad doorbidi kartaa inaad abaabusho safar kale si aad u booqato oo aad ugu jeclaato xeebo badan marka lagu daro kan ugu dheer Yurub.
Praia do Cassino, Rio Grande oo ku taal Brazil
Iyadoo aan waxba ka yareyn in 254 kiiloomitir dheer, xeebtaan waxay ku jirtaa Buugga Guinness of Records oo ah xeebta ugu dheer adduunka. Waxay ka bilaabmaysaa magaalada Río Grande ilaa magaalada Chuy ee xadka la wadaago Uruguay. Waa xeeb aan caadi aheyn oo dhex marta magaalooyin dhowr ah taasna waa wax lala yaabo dalxiisayaasha had iyo jeer doonaya inay ku raaxeystaan ​​aragtida xeebta ugu dheer adduunka. Dhex dhig!
Xeebta Cox Bazar ee ku taal Bangladesh
Haddii aad qorsheyneyso inaad u tagto Bangladesh fasax ahaan ma awoodi doontid inaad tabi doontid xeeb kale oo loo tixgeliyo inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu dheer adduunka oo aan wax kayar lahayn 240 kiiloomitir oo ciid ah oo aan kala go ’lahayn. Waxay ku taal koonfurta Chittagong waxayna leedahay macbadyo Buddhist ah wadada ay marayaan.
Sagaashan Mile oo ku yaal New Zealand
Haddii aad rabto inaad u safarto New Zealand ma tabi kartid xeeb magaceedu ku siinayo tilmaam ah inta ay tahay. Waxaa loo yaqaan 'XNUMXs Miles' sababtoo ah tani waa dhererka ku dhex socda xeebteeda, taas oo u dhiganta wax aan ka yareyn 140 kiiloomitir xeeb ah, laakiin kaliya 82 kiiloomitir ayaan kala go ’lahayn. Waxay leedahay ciid wanaagsan oo tartamada kalluumeysiga ayaa sidoo kale la qabtaa. Intaas waxaa sii dheer, oo haddii taasi aysan ku filnayn, waxaad ka arki kartaa hoonbarrooyinka, nibiriyada iyo xayawaanka kale dhexdooda biyaheeda quruxda badan.
Jasiiradda Fraser, Queens, Australia
Kani waa jasiiradda ugu badan ee bacaadka leh adduunka sidaa darteed waa in laga fili karaa inay leedahay xeebo dhaadheer. Waxay cabirkeedu ka yarayn 1630 km2 waxayna leedahay xeerar dhan 120 kiilomitir. Waa jasiirad in badan ku soo korortay heer dalxiis iyada oo ay ugu wacan tahay biyaheeda nadiifka ah iyo caloosha meesha ku jirta.
Playa del Novillero, Nayarit, Mexico
Xeebtani waa mid aad u dalxiis sidoo kale ay sabab u tahay 82 kiiloomitir xeeb. Waxay leedahay biyo diirran oo gacmeed waxayna caan ku tahay muuqaal qurxoon. Xeebtani sidoo kale waa goob ku habboon in lagu tamashleeyo oo lagu raaxeysto xeeb qurux badan oo ay ku hareereysan yihiin dad waaweyn.
Sida aad aragto, waxaa jira xeebo badan oo adduunka ka jira oo runtii aad u dheer oo aad booqan karto kuna raaxaysan karto si xor ah markasta oo aad rabto inaad safar ugu baxdo meel jannada ah. Way fududahay sida raadinta xeebaha khariidada, helitaanka midka aad ugu jeceshahay dhammaantiis iyo bilow diyaarinta safarka ugu fiican. Waa inaad ballansataa duulimaadka ama tikidhada lagama maarmaanka ah, aad ka heshaa hudheel ama hoyga kuugu dhow si ay ugu fududaato marinnada xeebaha oo aad ugu raaxeysan karto wax kasta oo aagga la doortay kuu leeyahay.
Kee dhammaan xeebahaan ayaad ka jeceshahay inta badan? Ma taqaan mid uun? Haddii aad rabto inaad ku darto xeeb liiskan ama aad ka faallooto astaamaha aad u maleyneyso inay muhiim tahay in laga fiirsado dadka safraya mustaqbalka, xor u noqo inaad sidaas sameyso! Xaqiiqdii wax ku biirintaada waxaan dhamaanteen ku hodmin doonaa nafteena waxaanna awoodi doonnaa inaan ogaano meelo badan oo leh xeeb qurux badan oo adduunka ah. Wax badan ha sugin inaad abaabusho fasaxaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Xeebaha ugu dheer Yurub
Bora Bora, janno qalaad oo ku taal Faransiiska Polynesia
Gulhi, ayaa ah mid aan buuxin Maldives